Light make-up ho an'ny manga maso
ianao eto: Home endrika Treatments Light make-up ho an'ny manga maso
Zava-mahagaga ny masony any an-danitra manga Hue Rariny raha heverina ho ny anjely, kely tsotra loatra sy fanahy. Matetika ny manga maso hatsarana mahasarika tsy manan-tsiny miandranandrana sy voajanahary maso lalina na dia tsy misy make-up. Fa mba hanamafisana bebe kokoa ny nahasarika tsara tarehy ny fijery, azonao ampiasaina fahazavana make-up ho an'ny manga maso.
Soso-kevitra ho fampiharana makiazy ho an'ny manga maso
Mianto kalitao sy mahomby make-up- dia tsara-nampiofanina sy salama hoditra. Noho izany, eo ambanin'ny toe-javatra tsy misy afaka tsy ambanin-javatra ny paika ny fanadiovana sy ny moisturizing hoditra manodidina ny maso. Fa ny fikarakarana ny hoditra no nanolorana azy ho mampiasa mazava fanosotra tsy ahitana fofona, ary ny tanjon'ny masking faribolana teo imason'ny mampiasa concealer.
Mba hanatsarana ny hatsaran-tarehy ny loko sady nitetika ny manga maso, Tsy maintsy ho tonga mainty kayyalom avy amin'ny zorony anatiny ny maso amin'ny alalan'ny ho lasa ho tsara zana-tsipìka, tsipika miezaka mihoatra ny ivelany zorony. Anisan'izany ny zavatra hafa,, dia maso hanitatra ny maso.
Mba tsy fraying aloka, Tena tokony hampiasa ny banky angona, izay ampiharina amin'ny borosy fisaka faritra ambany ny zana-tsipìka. Ny vokatr'izany faritra tokony ho zaraina ho faritra telo horizontally ka nataony teo amin'ny manakaiky ny orona faritra ny aloky ny mamirapiratra mavo Hue. Ao amin'ny faritra afovoan'i ny ampiharina pearlescent alokaloka, ary ny faritra ivelany voaloto tamin'ny manga malefaka Tint. Telo matoatoa va no tsara shaded, tsy mba handrava azy mora ny mamorona sary. Ny tolo-kevitra loko mitambatra dia ho tsara ny hitady misy hoditra sy volo karazana loko.
Ny faritra ambony ny taonjato ihany koa ny tsy hiala nikarakara, mameno amin'ny matoatoa va ny beige, na vatosoa matoatoa. Izany nanazava ny hoditra ivelany sy hampifanaraka izany, manao landy hodi-maso, ary koa ny fanomezana isan-karazany ny olon-tiany sy ny fandokafany tena.
To-pahombiazana tanteraka fahazavana make-up ho an'ny manga maso, sy fahaiza-mandanjalanja izany, dia tsy maintsy ho tsara hoso-doko ny eyelashes sy ny volomasony amin'ny pensilihazo sy ny mascara mainty, combing tsara azy ireo.
Ny tolo-kevitra dikan-ny mazava make-up dia hifanaraka tanteraka tompony rehetra any an-danitra maso loko ary hijery lehibe na inona na inona ny akanjo. Dia mitaky ny fampiharana ny faran'izay kely ny fotoana, koa dia azo ampiasaina ho toy ny isan'andro, ary ny fara-Variant. Dia mitoetra ihany no mba hanampiana ny mamirapiratra make-up sy ny akanjo Accessories, ary ho vonona ny hahazo be dia be ny mampamangy.
Light make-up ho volontsôkôlà maso
Eye makiazy ao an-trano